Natiijada tartankii xalay dhexmaray dugsiyada sare ee Muntadda Qardho, Burtine Secondry, Sh. Xamdaan Bossaso iyo Alnuur Baran. – Radio Daljir
Natiijada tartankii xalay dhexmaray dugsiyada sare ee Muntadda Qardho, Burtine Secondry, Sh. Xamdaan Bossaso iyo Alnuur Baran.
Agoosto 11, 2011 12:00 b 0
Bossaso, Aug, 12 – Barnaamijka Tartan iyo Tacliin ee ay ku tartamayaan dugsiyada sare ee ku yaalla deegaanada Puntland ayaa xalay waxaa qaybta hore ee barnaamijka ku tartamay dugsiyada sare Muntadda Qardho iyo Burtinle Secondry, waxaana 11 buundo ku badiyey dugsiga Muntadda Qardho, halka Burtinle Secondry uu helay 7 buundo waxaana sidaasi 3-dii dhibcood ku qaatay dugsiga Muntadda. Labadan dugsi waxay ku wada jiraan (group-ka A).
Sidoo kale waxaa tartan kaas la mid uu qaybtii dambe ee barnaamijka dhexmaray dugsiyada sare ee Sh. Xamdaan Bossaso iyo Al-nuur Baran, waxaana 11 buundo ku badiyey dugsiga Sh. Xamdaan halka Al-nuur Baran uu helay 8 buundo waxaana sidaasi guushu ku raacday oo 3-dii dhibcood helay dugsiga Sh. Xamdaan. Waxayna labadan dugsi ku wada jiraan (group-ka B).
Afarta dugsi ee xalay tartamay waxay horay u soo tartameen min hal jeer, waxaana u dhimman min hal tartan oo kale kaas oo ah kan loogu gudbayo wareegga labaad. Waxaana wareegga labaad u soo baxaya group walba labada dugsi ee ugu dhibcaha bata.
Barnaamijka Tartan iyo Tacliin ee Radio Daljir ayaa waxaa iska kaashanaya qabashadiisa, shirkadda isgaarsiinta ee Golis, daladda waxbarashada ahliga ah ee Puntland (Pen), wasaaradda waxbarashada Puntland iyo Radio Daljir.
Barnaamijka waxaa caawa ku tartami doona qaybta hore dugsiyada Gambool Garoowe iyo C/laahi Ibraahim Ufayn oo wada jira group-ka C, iyo Shaafici Bossaso iyo Nawaawi Qardho oo ku wada jira (group-ka D) oo iyaguna tartami doona qaybta labaad ee barnaamijka haddii Alle idmo.
Baahin: Khamiis, Aug 11, Weriye Khadar Cawl ~ Daljir ~ Buuhoodle. Warbixin ku saabsan saamaynta abaaraha ee gobollada koonfureed ee Somaliya; Xukuumada federaalka ah oo sheegtay in Sebtembar la qaban doono shirka wadatashiga Somalida; Mid ka mid ah maxaabiistii lagu qabtay Taleex oo u dhintay dhaawicii soo gaaray.
R/Wasaare Gaas oo xafiiska ku qaabilay wafti uu hogaaminayo Amb. Mahiga.